Layered power structure created by Than Shwe to prevent Coup d’état | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« တစ်ကယ်လို့များ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အပေါစား အညံ့စား သတ္တိကြောင်သူတွေ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သူတွေ၊ သီလကြောင်တွေသာဆိုရင် ဒီလောက် များပြားရှည်ကြာနေတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ဆက်မခံတော့ဘဲ မြန်မာအစိုးရအကြိုက် ဘုန်းကြီးတွေပင့်ပြီး ဘာသာပြောင်းလိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်
သူ့ကိုယ်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘင်လာဒင်လို့ ဝန်ခံထားတဲ့ ဦးဝီရသူက အစိုးရအမိန့်ကြောင့် မွတ်စလင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအကြားမှာ ပြသနာတွေကို တမင်ဖန်တီးနေတာဖြစ် »
Layered power structure created by Than Shwe to prevent Coup d’état
In addition to those3parties in power described by Mr. Bran Sai below, in Burmese, at the back of them 4th. group was created, as invisible BLACK HAND, by Than Shwe : They are Aung Thaung, Aung Min, Kyaw San etc…Just look at the recent events…Thais 4th. group don’t care about Gov authorities and acting above Police, Justice system and army…That Invisible, dark hand group pulling the strings from behind is reinforced by Taunthar militant group called Swar Arr Shin, Former MI Chief General Khin Nyunt and his former MIs, 969 Ma Ba Tha or Military IMPLANT MOLE Fake Monks.And their activities were distributed on the Internet, web sites and FB by Hmuu Zaw and Ye Htut led, Russia trained Cyber-troopers. Some were trained in China and few in Israel.
လက်ရှိ မြန်မာပြည် အာဏာခွဲဝေမှု အပိုင်းမှာ …
ခေါင်ချုပ်က သန်းရွှေ ပါပဲ … ဒီလိုပဲ မြင်တယ် …
သန်းရွှေရဲ့ နည်းဗျူဟာနဲ့ သွားနေတာပါ …
သန်းရွှေဟာ တဦးတယောက်တည်းကို အာဏာ
အပ်နှင်းတာမျိုး မလုပ်ရဲခဲ့ပါဘူး …
သူကိုယ်တိုင် သူ့ဆရာ နေ၀င်းကို ကာပြန်ခဲ့တာပဲ …
ဒီတော့ သူ ၀ဋ်မလည်အောင် .. အာဏာကို သုံးပိုင်း
ခွဲလိုက်ပါတယ် ။ စစ်တပ် ၊ သမ္မတနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ နဲ့
လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဆိုပြီးတော့ပါ …
စစ်တပ် ကတော့ သူ့ အိမ်တော်ပါ ငယ်မွေးခြံပေါက်
ဖြစ်လို့ အာဏာပိုင်းမှာ အနည်းငယ် ပို သြဇာရှိနေပါတယ်။
ကျန် နှစ်ဦးဟာလည်း စစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေမို့
သူတို့ရဲ့ နောက်ခံ ဘက်ဂရောင်း အသီးသီး ရှိကြပါတယ် ။
ဒီတော့ Check and Balance ဆိုတာ ဒါကို ပြောတာပါ ။
ဘာမှ … အုပ်ချုပ်ရေး ၊ တရားစီရင်ရေး နဲ့ ဥပဒေပြုရေး
မဟုတ်ပါဘူး ။ အာဏာကို သုံးဦးစီမှာ နည်းနည်းစီ ခွဲပေး
ထားပြီး တဦးနဲ့ တဦး စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားတာပါ ။
ဒီတော့ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမယ် ဆိုပါစို့ …
မင်းအောင်လှိုင် တဦးတည် အာဏာစိုးပိုင်သွားရင် …
ကျန်လူတွေ နာပါလိမ့်မယ် ။ ဖြုတ်ထုတ်သတ် လုပ်ချင်
လုပ်လိုက်လို့ ရတာပါပဲ … နာမည်ကောင်းယူပြီး …
အားလုံး ထိုးကျွေးလိုက်လည်း ဖြစ်တာပါပဲ …
ဒါကြောင့် စစ်တပ် အာဏာပြန်သိမ်းမယ် ဆိုတာကို
လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး ။ သူတို့ကိုယ်တိုင် လက်မခံကြဘူးလို့
ပြည်သူတွေ အတွက် မျှော်လင့်ချက်ကတော့ …
သန်းရွှေကြီး သေသွားရင် … သူတို့ သုံးဦးကြား အာဏာ
ခွဲဝေပုံ အဝေမတည့် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ဖြစ်ကို
ဖြစ်လာမှာပါ ။ အားနည်းတယ်လို့ ထင်ရသူကို
ပ ထုတ်ရင်း … သူတို့ အချင်းချင်း ပြဿနာ တက်
လာပါလိမ့်မယ် … အဲဒါကတော့ ပြည်သူတွေအတွက်
သတင်းကောင်းတခု ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းရှိပါတယ် ။
မဟုတ်ရင်တော့ … ဒီ ၂၀၁၅ မှာ ဘယ်လို ညစ်ညာပြီး
တိုင်းပြည်အာဏာကို ရအောင်ယူသွားမလဲ ဆိုတာ
ကာလုံ တင်ထားတဲ့ အဆိုသာ အောင်မြင်ရင်
ခဏခဏ လွှတ်တော် ဖျက်သိမ်း ၊ ခဏခဏ
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနဲ့ ပြည်သူတွေ အအား
မနေရ ။ ပျော်စရာကြီး ဖြစ်နေတော့မှာပါ ။
အဆိုးမြင် ဗြန် ။
This entry was posted on November 18, 2014 at 4:23 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.